Instagram Followers Generator ator ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
February 28, 2019 0 Comentarios 8117
I-Instagram uhlelo lokusebenza lwe-BOM lwenethiwekhi yokuxhumana nabantu, iyona ekhule kakhulu eminyakeni yamuva, efinyelela amakhulu ezigidi zabantu abayisebenzisa kubasebenzisi bayo. Ekuqaleni kwayo kwakuyisicelo sokufaka, ukwabelana ngezithombe namavidiyo, kusukela ngo-2012 ngenkathi ithengwa yiFACEBOOK yaqala ukukhula kwayo ngesivinini.
Kusukela ngonyaka we-2103, i-Instagram iqala ukusetshenziswa ngamakhompiyutha futhi nayo iqala ukuqaliswa kokushicilelwa okuxhasiwe, amathuluzi awenza uthandeke ezinkampanini ezamukela abaphathi abanobungane ukuzisebenzisa njengezindlela zokwenza ukudayiswa kwe-digital.
Njengamanje, uma ungekho ku-instagram "Awukho" futhi yize kubonakala kunehaba kunjeya, lapho abalandeli bebhizinisi beba baningi, kuzokhiqiza kakhulu. Ungaba kanjani futhi uthole abalandeli kahle? Kulula ukusebenzisa i-generator ukuthola abalandeli abaningi ku-instagram. Ngokulandelayo sizokutshela ukuthi kanjani.
Izicelo ezihamba phambili ze-Instagram Followers generator
Umqondo ukuthola abalandeli abaningi, noma ngabe une-akhawunti yomuntu siqu noma yebhizinisi, sizokufeza lokho ngokusebenzisa i-generator yabalandeli ku-instagram yamakhasi noma ama-akhawunti kuwebhu.
Yini indlela engcono? Oyithola ithokomele kakhulu, lapha sikusiza ubone izinketho ezitholakalayo. Ake sixoxe ngezicelo (i-App)
Ingenye ethandwa kakhulu yi-Android, ikuvumela kunguqulo yayo yamahhala ukuhlanganisa bonke abalandeli bakho ngerejista, oyekile ukukulandela, okulandelayo, amaphrofayili, ukuthanda kanye nabalandeli. Enguqulweni yayo ekhokhelwayo, ungabona abalandeli, okuvimbe, abalandeli bomoya njengezithombe, ungalawula i-akhawunti, okuyinto ebaluleke kakhulu ukuthola abalandeli abaningi. Ithole ku-App Store.
Kuyinto esheshayo, isicelo samahhala esisithola ku-App Store. Isici sayo esikhulu ukuthi ilula futhi inobungane futhi imnandi ngoba isuselwa ekusetshenzisweni kwemali ebonakalayo oyishintshanisa ngokuthandwa nokulandelwayo, yenzelwe i-IOs noma i-Android.
Yakhelwe i-Iphone, isicelo esisheshayo kakhulu esenziwe ngabakhiqizi sabalandeli futhi ungathola ukulandela okuhle (ithrekhi) yabalandeli, labo abathumele izicelo, labo esifuna ukubalandela, labo esingasabafuni, labo abaphawulayo nabaphumelelayo okuthunyelwe. Sikuthole ku-AppStore.
Amakhasi ku-Instagram generator yabalandeli abaningi
Yize i-App isisiza ukuthola abalandeli ngamakhasi akwiWebhu, sizothola ikhwalithi yabalandeli noma yikuphi ukunakwa okufanayo kumlandeli. Manje sizobona amakhasi athile angakusiza kumishini yokwandisa inani labalandeli ku-akhawunti yakho ye-Instagram.
Ilula kakhulu futhi inobungani, iyashesha, inenguqulo yamahhala ongayithola nsuku zonke futhi ngayo ifike ekuthandweni okungaba ngu-20 nabalandeli abayishumi nsuku zonke, okungahambi kahle kuleli khasi ukuthi kufanele uphendule izinhlolovo ezinemininingwane yomuntu siqu. Izinhlobo ezikhokhelwayo zivela kokuthandwa okungu-10 kwezithombe kufika ku-40 njengekheli lewebhu www.mrinsta.com Ungakhokha ngama-Paypal noma amakhadi wesikweletu.
Kulula futhi kushesha, kepha akusebenzi kakhulu futhi kufanele ugcwalise izinhlolovo, ngaphezu kokwabelana ku-Twitter nakuFacebok, ngombono wethu kuyingozi encane.
Ishesha kakhulu futhi inobungani, yenza izinto ezenziwa ku-Instagram, inikeze abalandeli abangempela, inecebo lokuzama lamahhala lezinsuku ezi-3. Uhlobo olukhokhelwayo lunezinhlelo ezine zemisebenzi yezinsuku ezingama-30,90,180 nezingama-365, ama-autofollws, ama-autoOnfollwers, uhlu oluhlukanisiwe, ama-hashtag ahlukanisiwe. Uyithola ku- www.speedygraph.co/es
Leli khasi linconywe kakhulu ngoba liyashesha kakhulu, amanani entengo amahle, ukukhokha okuphephile, linemininingwane nensizakalo yomsebenzisi ukuxazulula noma ikuphi ukungabaza ngama-imeyili, isevisi engaziwa, okungukuthi, ababoni ukuthi unenkontileka yale nsizakalo, ngaphandle kokhiye . Kungenxa yezinkampani ezibhalisiwe kuphela
Emhlabeni ogcwele umhlaba, kubaluleke kakhulu ukuthi bakwazi wena futhi njengoba sesikutshelile ukuthi kukhona, uma unenkampani noma unentshisekelo yokwaziwa, sincoma kakhulu ukuthi usebenzise amakhasi akhokhelwayo, ngoba akunika abalandeli abasezingeni eliphakeme kakhulu Banikeza insizakalo eqinisekisiwe yeningi elikhulu, ngakho-ke ukwaba ingxenye encane yesabelomali ukukhuphula isibalo sabalandeli kukuqinisekisa impumelelo kumasu akho wokuthengisa, siyaqinisekisa ukuthi abalandeli bakho, okuthandayo nokuphawulayo kuzokhula kakhulu.
Ama-Akhawunti noma Abalandeli Abasebenza Ngezifiso
Uma ungazethembi zonke lezi zinhlelo kodwa usafuna ukuthola abalandeli abaningi, kunendlela lapho ungathola khona ngaphandle kokukhokha noma ukusebenzisa noma iliphi ithuluzi.
Ku-Instagram uqobo kukhona ama-akhawunti asesidlangalaleni lapho ungalandela abalandeli ngokushesha okungatheni ngezindlela ezijwayelekile. Vele ubeke umaki we- #Follow4Follow enjini yokusesha yeHashtag.
Lapho uzothola uchungechunge lwamaphrofayela we-Instagram lapho uzonikezwa khona abalandeli ngaphandle kokutshala imali, ngaphezu kwalaba balandeli. Bangama-100% angokoqobo. Inqubo yokuthola abalandeli balama-akhawunti yile elandelayo:
I-1.- Beka injini yokusesha engu- #follow4follow
I-2.- Faka i-akhawunti ekhiqiza ukuzethemba okwengeziwe
3.- qala ukulandela i-akhawunti oyikhethile
4.- kule akhawunti kufanele ulandele bonke abasebenzisi abalandelana
I-5.- Ngemuva kwalokhu linda imizuzu embalwa. Lokhu kulandelwa kuzoqala ukukulandela
Le nqubo ihamba kancane kunokuba izinhlelo zokusebenza zokuthola abalandeli be-instagram, kodwa konke kuvunywa ngobungozi ngoba konke kusebenza ngohlelo lokusebenza olufanayo lwe-Instagram.
Noma kunjalo, kufanele wazi ukuthi laba bantu akuvamile ukuthi benze okunye ukusebenzisana okunjengokuthandayo noma amazwana, ngaphandle kokuthi okuqukethwe kwakho kukuhle kakhulu, bazokulandela kuphela.
1 Izicelo ezihamba phambili ze-Instagram Followers generator
1.2 I-TURBO NJE
1.3 LANDELA UKUVULA
2 Amakhasi ku-Instagram generator yabalandeli abaningi
3 Ama-Akhawunti noma Abalandeli Abasebenza Ngezifiso
I-DM Instagram noma i-Direct Messaging Kuyini nokuthi ungayisebenzisa kanjani?
Izeluleko Zokuthengisa ze23 ku-Instagram